Ingxenye ye-Alumina Ceramicabakhiqizi nabahlinzeki | XTL
Ingxenye ye-alumina ceramic babe ne-conductivity ephezulu yokushisa, amandla acindezelayo, nokumelana nokushaqeka okushisayo. I-Alumina iyimpahla ye-ceramic ene-conductivity ephezulu ye-thermal, amandla acindezelayo, nokumelana nokushaqeka okushisayo. Iphinde ibe nokunwebeka okuphansi kokushisa, okuyenza ibe yinto efanelekile yokusetshenziswa kwesithando ku-crucible, tube, kanye nefomu le-thermocouple sheath. I-Alumina inobulukhuni obuphezulu kanye nokumelana nokugqokwa okuhle, okuyenza ibe into efanelekile yamavalvu ebhola, amaphampu episton, namathuluzi okudweba ajulile. Ngaphezu kwalokho, ingahlanganiswa kalula nezinsimbi nezinye izinto ze-ceramic zisebenzisa amasu okubopha kanye ne-metalizing.Izingxenye ze-Alumina zingasetshenziswa kabanzi kuma-electronics, izingxenye zepompo kanye nezinzwa zezimoto.